आफ्नै बिहेका दिन किन भागे यि बेहुला ? हुनेवाला बेहुलीले सडकमा नै यसरी गरिन् रामधुलाई (भिडियो) « OSNepal.com :: Latest News,Breaking News, Latest, Politics, World, Entertainment, Sports, Technology, Interview, Nepal News
आफ्नै बिहेका दिन किन भागे यि बेहुला ? हुनेवाला बेहुलीले सडकमा नै यसरी गरिन् रामधुलाई (भिडियो)
एजेन्सी । भनिन्छ श्रीमान् र श्रीमतीबिचको सम्बनध निकै पवित्र हुन्छ । त्यो सम्बन्धमा बाँधिएपछि श्रीमान् श्रीमती एक अर्काबिच डुबेर सर्मर्पित हुन्छन् । यसैबिच चीनमा एक युवक विबाहका दिन भागेको आरोपमा हुनेप्वाला बेहुले रामधुलाई गरेको भिडियो भाइरल बनिरहेको छ ।
हुनेवाला बेहुला आफ्नो विवाहमा नगएपछि हुनेवाला बेहुलीले रामधुलाई गरेकी हुन् । घटनाको भिडियोमा केटी बैवाहिक पहिरनमा केटालाई घिसारी रहेको देख्न सकिन्छ । जुन भिडियो अहिले विश्वभर चर्चामा छ । यद्यपी यो घटना वास्तविक हो वा बनावटी हो भन्ने विषयमा कतिपयले शंका उब्जाएका छन् ।